Twazzup: Fanaraha-maso ny fotoana tena izy ho an'ny Twitter | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 2, 2013 Talata, Oktobra 1, 2013 Douglas Karr
Raha ny hevitro, Twazzup manana interface tsara kokoa, azo ampiasaina betsaka kokoa noho ny Twitter noho ny vaovao omeny ny mpampiasa. Hanombohana an'i Twazzup, ampidiro fotsiny ny tantana Twitter, teny lakile na tenifototra - ary ny interface user dia manome layout madio miaraka amin'ny teny lakile mifandraika amin'ny tampony, ny mpampiasa ary ny fampahalalana trending manerana ny pane ankavia, ary ny bitsika tena izy eo amin'ny ilany ankavanana.
Tamin'ity ohatra ity dia nitady aho Tolo-kevitra momba ny varotra, liana amin'ny resaka mety hitranga amin'ny Internet momba ny mpanohana anay, TinderBox. Ny vaovao tsara dia ny Martech Zone dia hita ho ny piraofilina ambony mitaona raha ny momba azy tolo-kevitra momba ny varotra, nefa toa tsy dia misy zavatra hafa miseho eto.
Andian-teny malaza kokoa mety ho fivarotana enablement, ny sokajy ho an'ny ray aman-dreny amin'ny sehatry ny tolo-kevitra momba ny varotra. Notsapaiko izany ary fantatro ny sasany amin'ireo olona nitaona olona sy resaka nifanaovana tamin'ity lohahevitra ity… saingy mbola tsy ampy ny resaka nifanaovana fisoratana anarana Tweet Per Hour (TPH) eo amin'ny efijery. Ka… andao hiakatra iray indray amin'ny ambaratongan'ny lohahevitra - #sales. Boom! Misy sioka 155 isan'ora amin'ny lohahevitra.
Ka - ny torohevitro ho an'ny mpanjifako dia mety mbola hiasa ianao mba hananganana fitaomana ho an'ny tenifototra sy lohahevitra tolo-barotra ary fivarotana enablement, saingy amin'ny farany dia tokony hiresaka ilay teny malaza kokoa izy ireo varotra. Izany dia mandeha amin'ny paikadin'ny votoatin'izy ireo ihany koa - fananganana lanja manodidina ny teny hoe varotra sy fikendrena ireo mpanafika mifandraika amin'ny varotra sy ny sehatry ny indostria mba hamoahana ny teny amin'ny vokatr'izy ireo.
Twazzup manao an'ity raharaha ity tsotra!
Tags: mitadiava influencer ao amin'ny twittermanara-maso tenifototraamin'ny fotoana katrokatwazzupTwitter
10 Okt 2014 amin'ny 4:01 PM
Salama Doug, manontany tena aho raha afaka manampy ahy ianao. Nandritra ny herinandro teo dia tsy afaka niditra Twazzup aho. Mandefa ahy amin'ny efijery iray mandrisika ahy hiditra amin'ny Twitter ity. Rehefa tonga eo amin'ilay efijery aho dia mitsambikina avy hatrany amin'ny efijery Twazzup volomboasary. Afaka miditra amin'ny Twitter aho.
10 Okt 2014 amin'ny 4:27 PM
Tsikaritro fa nitranga izany rehefa maty ny cookies indraindray miaraka amin'ireo mpampiasa. Moa ve ianao manakana ny cookies amin'ny toeran'ny browser-nao?